» रहस्यमय जीव ‘यति’, नेपालमा हुने सम्भावना कति?
३ असार २०७६, मंगलवार ०६:३९
धेरै हिमाली भूभागको अध्ययन पछि यतिको बारेमा पुस्तक लेखेका डेनिअल सी टेलरले पनि सो पाइला यतिको नभएको बताए। ‘भारतीय सेनाले बताएको आकार केवल डाइनासोरको मात्र हुन सक्छ’। भारतीय सेनाले पाइलाको लम्बाई ३२ इन्च बताएको थियो।
प्रकृतिमा रुचि राख्ने फोटोग्राफर विशाल गौतम भन्छन् ‘यतिको चर्चा सोलुखुम्बु क्षेत्रमा बढी हुने गरेको छ। बर्सेनि क्यामेरासहित पर्यटकहरू सो ठाउँमा घुमी रहन्छन्। कसै न कसैले त खिच्नु पर्ने नि ? मलाई छ भन्ने कुरामा विश्वासै लाग्दैन।’ वन्यजन्तु अनुसन्धानकर्मी यादव घिमिरे भन्छन्, ‘यदि यति भएको भए अहिलेसम्म हिमाली क्षेत्रमा गरिएको क्यामेरा ट्रयापमा पर्नुपर्थ्यो। र अर्को कुरा यो जीवले खानको लागि जङ्गल तथा बस्ती क्षेत्रमा आउनु पर्ने, देखिनु पर्ने खै त देखिएको! सधैँ हिउँ भएको क्षेत्रमा मात्रै बस्न सम्भव हुँदैन।’
यिनको बारेमा सबैभन्दा पहिला सन् ३२६ मा इन्दस उपत्यकामा सुनिएको अलेकजन्दरले उल्लेख गरेका थिए। सन् १९५०को दशकमा नेपाल सरकारले यतिबारे चर्चा चुलिएपछि यति खोज्न विशेष लाइसेन्स खोलेको थियो। सो समयमा प्रति लाइसेन्स ५ हजार भारु दस्तुर तोकिएको थियो। तर अहिलेसम्म कसैले पनि समात्न सकेको अभिलेख छैन।
सन् १९२१ मा ब्रिटिस चार्ल्स हवार्ड बरीले सगरमाथा क्षेत्रमा पाइला भेटिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। सन् १९३८मा पहिलो पटक यति खोजको लागि प्रयास भयो। जर्मनका प्राध्यापक अर्न्सट स्यफर यति बेग्लै प्रजाति नभएर हिमाली रातो भालु भएको निष्कर्षमा पुगेका थिए। सन् १९५१ मा इरिक सीप्टन र माइकल वार्डले सगरमाथा क्षेत्रमा १३ इन्च लामो पाइला भेटिएको उल्लेख गरेका छन्। सन् १९६७ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा यति जस्तै ठुलो खुट्टा भएको जनावरको तस्बिर खिचिएको थियो। रोजर प्याटरसन र बोब गिम्लिनले खिचेको सो तस्बिर नक्कली हो वा सक्कली हो भनेर अहले सम्म आशङ्का गरिन्छ। नेपाल, चीन, भारत, भुटान बाहेक पश्चिमा मुलुक पनि यसको बारेमा विश्वास गर्छन्। वैज्ञानिक रूपमा यिनको सम्बन्ध हिमाली भालुसँग देखिए पनि बेग्लै प्रजाति हो भन्ने प्रमाणहरू अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्।
नेपालको हिमाली भेगमा यिनको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। लेखकसहितको अनुसन्धान टोलीले सन् २०१३ मा हुम्ला जिल्लाको लिमी क्षेत्रमा यति बारे चर्चा सुनेका थिए। स्थानीय नागरिक वैज्ञानिक पासाङ लामाले हिमाली रातो भालु र यति फरक हुने बताएका थिए। तर ५३ दिनको खोजमा यति कतै भेटिएन। ‘चार्ल्स स्टुनर’ द्वारा लेखिएको पुस्तक ‘शेर्पा र हिममानव’ मा भूमिका लेख्ने जोन हन्टले यतिमा विश्वास गर्ने बताएका थिए। सो पुस्तकमा थ्याँग्बोचे नजिकैको गुम्बामा सन् १९५१ को हिउँद महिनामा लामाहरूले यति भेटेको उल्लेख छ। शेर्पा समुदाय भन्छन्, जसले यसको विश्वास गर्छन् तिनले मात्र देख्न सक्छन्। आजभन्दा ठीक २४ वर्ष अघि कास्कीको पर्क्यु र नागिधार बनको सिमानामा मनिता गुरुङको वन मान्छेसँग भेट भयो। गुरुङको आँखा मिल्ने बित्तिकै वन मान्छेको शक्तिले उनी बाटोदेखि करिब १० मिटर पर पछारिन्। उनी जस्तै केही मानिसहरूले वन मान्छेले तर्साएको कथाहरू कास्की, लमजुङ, म्याग्दीका दुर्गम गाउँहरूमा सुन्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा यति भने जस्तै तल्लो भूभागतिर वन मान्छेको चर्चा हुने गरेको छ। जानकारहरू यी दुवै फरक प्रजाति भएको बताउँछन्।
नेपाल, भारत, भुटानमा यसलाई विभिन्न नाम दिइन्छ। ती नामहरूलाई नेपालीमा रूपान्तर गर्ने हो भने ‘हिम मानव’ ‘वन मान्छे’ ‘गाईवस्तुको भालु’ ‘यति’ ‘मान्छे जस्तो भालु’ ‘मेथी’ आदि हुन्छ। हिमाली भेगतिर भालेलाई मेथे र पोथीलाई इथे भनेर समेत भन्ने गरिन्छ। सोह्रौं शताब्दीतिर तिब्बतबाट नेपाल छिरेकाहरूले यतिको जानकारी नेपाल भित्र्याएको विश्वास गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि यसको चर्चा हुँदै आयको छ। यद्यपि सन् १८३२ मा ब्राइन हडसनले यति जस्तै जीवको बारेमा जर्नलमा उल्लेख गरेका थिए।
हिमाल तथा उच्च पहाडी भेगको दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने यो जीव असाध्यै कम रहेको मानिन्छ। धेरैले यसलाई ठूलो बाँदर जस्तो हुने बताएका छन्। तर आकारमा मानिस भन्दा ठूलो। कसैले भालु जस्तो पनि बताएका छन्। यसले ४ वा २ खुट्टा दुवैको प्रयोग गर्न सक्छ। यो पारदर्शीसमेत बन्न सक्छ। शरीर भरी भुत्ला, ठूलो खुट्टा, सानो शरीर भनेर यसको बयान गरिन्छ। यिनका दाह्रा ठूला हुन्छन्। हिमालमा मात्र नभई नेपालको वन क्षेत्र र बस्ती बढी भएको क्षेत्रमा समेत यिनको चर्चा वनमान्छेको रूपमा हुने गरेको छ। यसलाई देखियो भने मात्रै पनि बिरामी परिने विश्वास गरिन्छ। यिनीहरूको पाइला पछाडि फर्किएको हुन्छ भनेर समेत मानिसहरू बताउने गर्छन्।
भुटानमा स्थापित साक्तेंग वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र यतिको लागि भनेर छुट्ट्याइएको छ। अमेरिकन टिभी कार्यक्रम प्रस्तोताले सन् २००९ मा एभरेस्ट क्षेत्रमा पाइला देखिन्। उनले सङ्कलन गरेको यतिको रौँको अनुसन्धान गर्दा अन्य जीवसँग मिलेको थिएन। कतै यो जीव हिमालका कोखहरूमा लुकेर बसेको त छैन? तेन्जिङ नोर्गे सेर्पाका बुबाले देखेको र थुप्रै मानिसले चर्चा गर्ने यो जीव देखिन अझै कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो! नभेटिए पनि यति छ भन्ने आशामा रोमान्चित हुने समय भने हामीले पाइरहने नै छौँ। मानिसहरूको मनमा बसेको यो यतिको छाप वास्तविकतामा भेटिने यतिभन्दा निकै फरक खालको हुनेछ। प्राध्यापक शाह भन्छन्, ‘भेटिए त गज्जब हुन्थ्यो नि । तर छ जस्तो लाग्दैन मलाई’